Desigual wuxuu bedelaa astaantiisa si uu gabi ahaanba u rogo | Abuurista khadka tooska ah
Desigual wuxuu ku dhiiraday waxa noocyada kale aysan waligood sameyn doonin: sii astaantaada si buuxda oo buuxa. Taasi waa, runti way rogtay oo kuwa aan aqoon astaanta, way yaraan doonaan, waxaad moodaa inaad kula hadlaysid luqad kale.
Waxa ay isku dayaan ayaa ah inay taas muujiyaan waa inaad si kala duwan wax u aragtaa oo raadso aragti kale. Iyada oo ay jiraan wax kasta oo ku dhacaya cimilada, sidee ugu wanaagsan ee wax looga arki karaa dhinac kale si wax looga qabto dhibaato culus?
ka xalalka ayaa hubaal ah inay kala duwanaan doonaan iyo halka aan ka joogno xitaa ma awoodno inaan aragno, sidaa darteed markaan eegno qallooca astaanta Desigual, laga yaabee inuu furmo daaqad faham iyo halisteeda leh.
Isbedelada waligood lagama qaadin booska ugu raaxada badan. Waa inaad qatar gasho waana tan waxa Desigual uu sameeyay leh astaantaada cusub. Waxa ay raadineyso ayaa ah inay soo jiidato indhaha dhammaan kuwa haddii aysan warka ogeyn, la yaabi doona waxa dhacay ama haddii magaca bakhaarka la beddelay, ama, kani waa Desigual?
Haa, haa, si fiican u fiirso, waa gadaal, mid baa mid kale ku oran doona. Sababta tan isbeddel weyn ayaa ah sannad-guurada 35aad ee astaanta Xitaa looma rinjiyeynin summad isku dayday waxyaabo siyaabo aad uga duwan wixii horay loogu soo qaatay moodada ama waxa ku badan dharka maalinlaha ah ee malaayiin qof oo adduunka ah.
Hal ku dhigga loo adeegsaday isbeddelkan ayaa ah: "Iskuduwaan la'aan. Runtuna waxay tahay inay si fiican ugu habboon tahay wax kasta oo astaanta dharkani tahay oo ay jirtay. Xaqiiqdii, waxay sidoo kale ku noqdeen nuxurkooda lamaanaha qaawan ee Peret u qaabeeyey 1986.
Horey waad ogtahay, si aad wax uga aragto dhinac kale. Ka bax aaggaaga raaxada. Annaguna ma luminno isbedelka astaanta Mozilla.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » dhowr » Wax walba sii, xitaa haddii ay tahay Ragged ama qosol